06/01/2018 - 08:25:58 Maqaallo Super Admin
Maqaalkan kooban waxaan ugu tala galay inaan ku eego arrin muhim ah oo in la baraarujiyo mudan kadibna ay tahay inuu qof walba daawo u helo arrimaha aan kusoo bandhigi doono gunta qormadaydan.
13/12/2017 - 12:09:03 Maqaallo Super Admin
Inta badan wadamada Caalamka islaamka waxaa wali ka socda kacdoon ay sameynayaan shucuubta muslimiinta waxayna kagasoo horjeedaan warkii kasoo baxay dowladda Mareykanka ee magaalada Qudus u aqoonsanayay caasimadda Yahuudda.
02/10/2017 - 10:58:05 Maqaallo Super Admin
09/09/2017 - 14:17:31 Maqaallo Super Admin
Tan iyo markii ay DF-ku Itoobiya u dhiibtay muwaadinkii Soomaaliyeed ee C/kariin Qalbi dhagax, ayaa waxaa isi soo taraya hadallada qiirada leh ee ay ummada Soomaaliyeed ka oranayso dal iyo dibad intaba.
07/09/2017 - 11:59:14 Maqaallo Super Admin
Mas'uuliyiinta ugu sarraysa Ururka Midowga Afrika ayaa xaqiijiyay in go'aan kama dambeys ah laga gaaray bixitaanka ciidamada AMISOM ee Duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya
31/08/2017 - 17:29:58 Maqaallo Super Admin
22/08/2017 - 15:29:54 Maqaallo Super Admin
Hoggaamiyaha Dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay istiraatiijiyaddiisa cusub ee ku aaddan ladagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada oo loola jeedo ladagaalanka jamaacaadka Jihaadiga ah ee ka dagaallamaya caalamka islaamka.
07/08/2017 - 08:36:04 Maqaallo Super Admin
11/07/2017 - 11:31:59 Maqaallo Super Admin
04/05/2017 - 11:24:41 Maqaallo Super Admin
27/04/2017 - 17:54:18 Maqaallo Super Admin
Abwaan Cali Xuseen Xirsi ayaa Lixdameeyadii iyadoo ay abaar ba'ani dalka soomaaliya ku dhufatay ayay dadkii ka codsadeen in uu duceeyo, iyaguna ay aamiin ka dabadhahaan.
09/04/2017 - 15:37:38 Maqaallo Super Admin
Saxafiga Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa tiriyay gabay Cusub oo ku saabsan dib u xuroobidii magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
08/04/2017 - 19:40:12 Maqaallo Super Admin
06/04/2017 - 21:06:10 Maqaallo Super Admin
Sanaddii 2008 Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa isagoo xilka kasii degaya wuxuu magaalada Baydhabo ka sheegay in ciidamada 'Qaranka' wax uu ugu yeeray ay waqti aan dheerayn Al Shabaab ka saari doonaan dalka Soomaaliya.
03/04/2017 - 06:34:00 Maqaallo Super Admin
Video-gaan oo la daawan karo muddo 7 daqiiqo ah ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus kenyaan ah oo lagu qabtay dagaalkii weynaa ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Ceel-Cadde gobolka Gedo Koonfurta Soomaaliya.
15/02/2017 - 18:18:32 Maqaallo Super Admin
Soomaalidu waa dad iloowshiinyo dhow, waxa ay wax ku diidaan ama ku taageeraanna ay tahay mid xumbo ah oo aan sal ballaaran sii lahayn. Haddaba ilaa shalay galab waxa dhegaha naga wareeriyey taageero aanan garan karin goorta ay isbeddeli doonto, aadna loogu hadaaqayey, loona muujinayey Farmaajo oo ah…
12/02/2017 - 17:56:09 Maqaallo Super Admin
31/10/2016 - 17:37:03 Maqaallo Super Admin
24/09/2016 - 18:31:07 Maqaallo Super Admin
01/09/2016 - 18:49:22 Maqaallo